Ubukhosi base-Ottoman kwi-Offensive, 1300 - 1600
Umda weeNkqubela, i-1300 - 1600: ubuKrestu kunye no-Islam
Nangona iiNtsholongwane zade zide zigqityiwe, iYurophu yaseYurophu yaqhubeka iphantsi kwengcinezelo evela kuBukhosi base-Ottoman. Ama-Ottoman aya kwenza ukunqoba okuthabathayo, kuquka ukuthunjwa kukaConstantinople , indawo yokugqibela yoBukumkani baseRoma kunye neziko lokomoya lobu-Orthodox lobuKristu. Ekugqibeleni amaKristu aseNtshona ayeza kuhlaselwa ngokukhawuleza kwaye ahlale e-Yurophu ephakathi, kodwa ixesha elide "i-Arsenal Turkey" yayiza kubetha amaphupho aseYurophu.
Umda weeNkqubela: Ulawulo lwe-Ottoman kwi-Offensive, 1300 - 1600
1299 - 1326 Ukubusa kuka-Othman, umsunguli wobukhosi baseTurkey baseTurkey. Unqoba amaSeljuks .
1300 AmaSulumane okugqibela aseSicily aguqulwa ukuba abe ngamaKristu. Nangona i-Sicily yayibuyiselwe ngabantu base-Normans ngo-1098, amaSulumane aye avunyelwe ukuqhubeka nokwenza ukholo lwabo aze abone izinto ezibalulekileyo zemikhosi yempi yaseSicilian.
1302 I- Mamluk Turks isonakalisa intolongo yeSigqeba seNdlu kwisiqithi saseRuad (ngaphandle kolwandle lwaseSiriya).
1303 amaMongolia atyhulwa kufuphi neDamasko , ngaloo ndlela iphelisa ingongoma yaseMongol ngeYurophu naseMiddle East.
1305 Isenzo sokuqala esichaziweyo sokubonisa intloko kwiLondon yaseLondon kuvela: USir William Wallace , umphathi waseScotland.
1309 I-Teutonic Order idlulisela ikomkhulu layo eMarienburg, ePrussia.
1310 I- Hospitallers idlulisela ikomkhulu lawo eRhodes.
1310 Ukusetyenziswa kokuqala kokuxhatshazwa ngokusemthethweni eNgilani kwenzeka: ngokubhekiselele kwii-Templars.
NgoMeyi 12, 1310 Kwiintlawulo zobuqhetseba, ama-Knights Templar atshiswa kwisibonda saseFransi.
Ngo-Matshi 22, 1312 Umyalelo we- Knights Templar uchithwa ngokusemthethweni
1314 Ukulwa e-Bannockburn: URobert Bruce woyisa imikhosi ka-Edward I kwaye uzuze ukuzimela kweScottish. U-Edward ndifa ngo-1307 ngexesha lokuhamba ngasentla ukuya kunqoba uBruce.
Ngomhla wama-18 kuMatshi, 1314 IsiTransfer Knights saseFransi zitshiswa kwisibonda.
1315 Isimo sezulu esingalunganga kunye nokungaphumeleli kwezityalo kubangele indlala enyakatho-mpuma yeYurophu. Izimo ezingenamntu kunye nokungondleki kwandisa izinga lokufa. Nangemva kokuvuswa kweemeko zezolimo, iimeko zeemeko zemozulu ziyavuna kwakhona. Umxube wemfazwe, indlala kunye nesibetho kwi-Middle Ages ekupheleni kwanciphisa isiqingatha.
1317 Osman I, umsunguli wobukhosi base-Ottoman , ujikeleze isixeko samaKristu saseBursa. Kungekugqibeleni kuya kutsho kube ngowama-1326, unyaka wokufa kuka-Othman.
1319 Ukuzalwa kukaMrad I, umzukulu ka-Osman I. Murad yayiza kuba yinto eyikrakrayo yaseYurophu yaseYurophu, ithumela imikhosi emikhulu yemikhosi elwa neBalkans kunye ne-tripling ubukhulu bobukhosi buka-Ottoman.
1321 I-Inquisition iyatshisa uCathar wayo wokugqibela.
1325 Ama-Aztec afumana iTenochtitlan (ngoku i-Mexico City).
1326 Ukufa kuka-Osman I, umsunguli wobukhosi base-Ottoman. Indodana yakhe, u-Orkhan I, yenza iBrasa inkulu yakhe kwaye iphuma apha ukuba ukukhula kolawulo lwase-Ottoman ngokubanzi kubhalwe. Ukongezelela ekukhokeni iiTurkey zokuqala e-Yurophu, i-Orkhan idala iiJanishi (uYani Sharis, isiTurkey kuba "Amagosa amatsha), amakhwenkwe amantombazana athathwe kwiidolophana zamaKristu aze atshintshwe kwiSilamsi.
Iwaka "iya kubanjwa" ngonyaka kwaye ithunyelwe eConstantinople ukuqeqeshwa. Ziqwalaselwa ngethuba lokuba lixhoba elifanelekileyo kakhulu nelona likhulu kunabo bonke.
1327 Ukutshatyalaliswa kobukhosi baseSeljuk, iindawo zaseArabhu nasePersi zihlukaniswe kwimibutho emininzi yemikhosi kude kube ngu-1500. Ubukhosi baseTurkey base-Ottoman bubeka i-capital yayo eBursa.
1328 INgilani iyavuma ukuzimela eScotland, kunye noRobert Bruce njengoKumkani.
1330 - 1523 Nangona ingaxhaswa ngokusemthethweni ngecandelo lolawulo, i-Hospitallers iyaqhubeka iCrossus Crusading ukusuka kwisiseko sayo eRhodes.
1331 AmaTurkey aseTurkey abamba iNicaea aze athi kwakhona i-Iznik.
1334 Iinqanawa ze-Crusader zithintela iqela lamaTurkey asebenza kwiGulf of Edremit.
1336 Imfazwe yeminyaka eyikhulu phakathi kweFransi neNgilani iqala.
1337 Ukuzalwa kweTimur-i Lang (iTamerlane, iTimur iLame), umbusi onobudlova waseSamarkand owanqumla umonakalo omkhulu wokutshatyalaliswa kwePersia nakumaMbindi Mpuma. I-Timur ifumana iDynasty yaseTimurid kwaye iba yintlekele ekwakheni iipiramidi ngaphandle kweentaba zeentshaba zakhe ezibuleweyo.
1340 iMfazwe yaseRio Saldo: U- Alfonso XI waseCastile no-Alfonso IV wasePortugal unqoba umkhosi omkhulu wamaSulumane aseMorocco.
1341 Ukufa kwe-Oz Beg, inkokheli yaseMongol eyaguqula abantu bakhe kwi-Islam.
1345 I- Notre Dame Cathedral eParis, eFransi, igqityiwe.
1345 AmaTurkey ase-Ottoman acelwa uncedo lukaJohn Cantacuzene ngokuchasene nelokulwa netrone yaseByzantine. UJohn wayeba nguYohane VI kwaye anike intombi yakhe eneminyaka elishumi elinesithandathu ubudala u-Theodora ku-Orkhan I njengomfazi. Le yithuba lokuqala lamaTurkey amaTurkey awela i-Dardanelles eYurophu.
1347 U-Black Death (isibetho se-bubonic) sifinyelela eCyprus esuka empuma ye-Asia.
c. 1350 Ukuhlaziywa kwe-Renaissance kuqala e-Itali.
1354 IiTurks zithatha iGalpolili, zakha indawo yokuqala yokuhlala eTurkey eYurophu.
1365 Ulandelwa nguPetros I waseKhupro, amaCrafers athabatha isixeko saseYiputa saseAlexandriya.
1366 I- Adrianople (i-Edirne) iba yi-capital capital yaseTurkey.
1368 I-Ming Dynasty isungulwe e-China ngunyana wezilwanyana oye waba yi-monk kodwa kamva wabakhokelela ekuvukeleni iminyaka engama-13 kumabusi aseMongol abonakele kunye nabangasebenzi. I-Ming ithetha "ukukhanya."
09, 1371 iMfazwe yaseMaritsa: Amandla aseSerbs kunye namaHungary athunyelwa ukulwa neTurkey e-Ottoman eBroatia.
Bahamba ngeAdrianople kodwa bafika kuphela kwiCenomen, kuMlambo iMaritsa. Ngelo busuku bayamangaliswa kukuhlaselwa kwe-Ottoman ekhokelwa nguMurad mna. Amawaka abulawe kwaye aphonswe xa ezama ukubalekela. Le yayiyindlela yokuqala yokuthatha amanyathelo aseJamani malunga namaKristu.
1373 AmaTurkey ase-Ottoman axinzelela uBukhosi baseByzantium, ngoku phantsi koJohn V Palaeologus, ukuya kwi-vassalage.
1375 AmaMamluk athatha uSis, aphelisa ukuzimela kweArmenian.
1380 Iimbono zokugqibela zoBukhosi baseByzantium e-Asia Minor zithathwa yiTurks.
1380 IMfazwe yaseKukoko Field: UDmitri Donskoy, uNkosana oyiNtloko yaseMoscow, unqobile amaTartars amaSilamsi kwaye unako ukuyeka ukuhlawula umvuzo.
1382 I-Turks ithatha iSofia.
1382 IiTartar zihamba ngasenyakatho, zithatha iMoscow, ziphinde zenze iRhafu.
NgoJuni 13, 1383 Ukufa kukaJohn VI Cantacuzene, umbusi waseByzantine owavumela ukuba amabutho aseTurkey awele kuqala eYurophu ngenxa yokuba wayefuna uncedo lwawo ngokuchasene nesitrone saseByzantine.
1387 Iingqungquthela uGeffrey Chaucer uqala umsebenzi kwibugcisa bakhe.
1387 Ukuzalwa kukaJohn Hunyadi, iqhawe lesizwe laseHungary elinemizamo yokulwa noTurkey waseTurkey kunokuthintela umgaqo weTurkey ukuba ungene eYurophu.
1389 Ukufa kukaOrhan, unyana ka-Osman, unyana ka-Orhan, u-Murad I, uthatha ubukhosi base-Ottoman. U-Murad uba yintsongelo ye-Yurophu yaseYurophu, ukuthumela imikhosi emikhulu yemikhosi kwi-Balkans kunye ne-tripling ubukhulu bobukhosi base-Ottoman.
NgoJuni 15, 1389 Imfazwe yaseKosovo Polje: Murad Ndifuna ukuba uLazr Hrebeljanovic, inkosana yaseSerbia, ahlawule aze abulawe xa amazwe akhe ehlaselwa.
UHrebeljanovic ukhetha ukulwa nokuphakamisa umkhosi oqulethwe ngamajoni avela kulo lonke elaseBalkan kodwa kusekho isiqingatha sobukhulu bamandla aseTurkey. Imfazwe yangempela yenzeka kwi "Field of Blackbirds" okanye iKosovo Polje, kwaye uMrarad ndibulawa xa uMilosh Obilich, ebiza njengomcuphi, ugwaza uMrad ngeqebunga elinetyhefu. AmaKristu antshatyalaliswa ngokupheleleyo kwaye u-Hrebeljanovic uyabanjwa aze abulawe. Amawaka amabanjwa asebuKristu abulawa kwaye iSerbia yaba ngumbuso wee-Ottomans, kodwa oku kumelela ukufikelela kwabo kude kwiYurophu. Ngokufa kukaMurad unyana wakhe, uBajazet, unomntakwabo uYakub wabulala waza waba ngu-Ottoman sultan. Abazalwana bokubulala xa beba yi-sultan babeza kuba yinto yesiTurkey kwiminyaka emibini elandelayo.
NgoFebruwari 16, 1391 Ukufa kukaJohn V Palaeologus, umbusi waseByzantine. Uyaphumelela ngunyana wakhe, uManuelel Palaeologus, ngubani okwangoku kuthethwa enkundleni yomlawuli wase-Ottoman uBeyazid I eBursa. UManuel uyakwazi ukusinda aze abuyele eConstantinople.
Ngo-1395 uKumkani Sigismund waseHungary wathumela abathunywa kumandla ahlukeneyo aseYurophu ukuba acele uncedo ukukhusela imida yakhe kwiTurkey yase-Ottoman. UBajazet, wase-Ottoman sultan, wayeqhayisa ukuba uya kuqhuba eHungary, e-Italy, aze aguqule iSt. Peter Cathedral ibe yinqanaba lamahashe akhe.
Ngama-1396 amaTurkey aseTurkey anqoba iBulgaria.
Ngo-Apreli 30, 1396 Amawaka amabhinqa aseFransi namasosha avela kwi-capital city yaseBurgundian iDijon ukunceda amaHungary ngokumelene namaTurkey ase-Ottoman.
NgoSeptemba 12, 1396 Ibutho elihlangeneyo lamajoni aseFransi naseHungary lifika eNicopolis, idolophu yase-Ottoman Turk eYurophu, kwaye iqalisa ukukhawulela.
NgoSeptemba 25, 1396 Imfazwe yaseNicopolis: Umkhosi wamaKrotrha wamadoda angaba ngu-60 000 kunye nomkhosi waseHungary waseSigismund waseLuxembourg kunye neFrentshi, isiJamani, isiPolish, isiNtaliyane kunye nesiNgesi, bangena kwiindawo zaseTurkey zaseTurkey baza bazingqinga iNikopolis Bhulgariya. I-Ottoman sultan, iBajazet, ibuthela ndawonye umkhosi wakhe omkhulu (owenziwe ngamasoldari ayebhinqileyoConstantinople) kwaye uyakhulula isixeko esizingqelekileyo, esichasayo amaKreseli. Ukunqoba kweTurkey kubangelwe kakhulu kwiFrentshi engakwaziyo nokuzikhukhumeza-nangona umkhosi weentambo zamaFarsi uphumelela okokuqala, baphoqelelwe ukuba bangene kwisicupho esikhokelela ekubulaweni kwabo. IBulgaria iya kuba yintsimi yelizwe kwaye, njengeSerbia, iya kuhlala enye ukuya ngowe-1878.
1398 uDehli unqotshwa nguTimur uLame (uTamerlame), ukumkani waseSamarkand. Ibutho laseTurkey laseTurkey libhubhisa i-Dehli, libhubhisa abantu baseHindu bendawo, ize ihambe.
1400 Amaphondo aseNtshonalanga yaseItali acwangcisa iinkqubo zabo zorhulumente. Urhulumente waseVenice uba ngu-oligarchy; I-Milan ilawulwa yizinto ezidityanisiweyo; kwaye iFlorence iba yiphablikhi, ilawulwa yityebi. Ezi zintathu izixeko zanda kwaye zinqobe amaninzi eNyakatho yeItali.
1401 IBaghdad kunye neDamasko iyanqotshwa yiTimur.
NgoJulayi 20, 1402 iMfazwe yaseAnkara: I-Ottoman sultan Bajazet, umzukulu ka-Osman I, unqotywe kwaye ithinjelwe nguMongol warlord eTimur e-Ankara.
1403 Emva kokufa kweBajazet, unyana wakhe uSuliman Ndiba ngu-Ottoman Sultan.
1405 Ukufa kweTimur-i Lang (iTamerlane, iTimur iLame), umbusi onobudlova waseSamarkand oye wanqumla umonakalo omkhulu wokutshatyalaliswa ngaphesheya kwePersia naseMpumalanga Ephakathi. I-Timur yasungula iDynasty yaseTimurid yaye yaziwa ngokuba yakha iipiramidi ngaphandle kweengqumbo zeentshaba zakhe ezibuleweyo.
NgoJulayi 25, 1410 iMfazwe yaseTannenberg : Amapolisa asePoland naseLithuania awanqoba amaTeutonic Knights.
1413 Mahomet, unyana kaBajazet, uba ngu-Ottoman sultan Mahomet I emva kokutshatyalala abazalwana bakhe abathathu kwimfazwe yombutho eyayingaphezu kweminyaka eyi-10.
1415 IsiPutukezi sithatha isixeko saseCeuta ngasogwini olusenyakatho yeMorocco, okokuqala ngqa ukuba i-Crusade ngokumelene namaSulumane yathatyathwa kwingingqi esenyakatho-ntshona ye-Afrika.
NgoJulayi 06, 1415 uJan Hus washiswa ngenxa yeqhwa e Constance, eSwitzerland.
1420 Abaxhasayo bakaJohn Hus bawutshabalalisa iJamani "abaqhankqalazi." Ama-Hussites aphantsi ahokelwa nguGeneral John Zizka.
Ngomhla ka-1 Matshi, 1420 uPapa uMartin V wabiza umkhosi wokulwa nabalandeli bakaJohn Hus.
1421 Ottoman sultan Mahomet Ndifa kwaye uphumelela ngunyana wakhe, uMradrad II.
NgoJulayi 21, 1425 Ukufa kukaManuel II Palaeologus, umbusi waseByzantine. Kungekudala ngaphambi kokufa uManuel uphoqelelwa ngamaTurkey aseOttoman ukuba aqale ukuhlawula umvuzo wonyaka.
Ama- 1426 amabutho aseYiputa alawula iSyprus.
Ngo-Apreli 29, 1429 uJoan waseArc waqhuba amaFransi ukuba anqobe umkhosi wesiNgesi ngokuphakamisa u-Orleans.
NgoMatshi 30, 1432 Ukuzalwa kukaMehmed II, i-Ottoman sultan eya kuphumelela ekuthineni iKonstantinople.
1437 amaHungary phantsi kolawulo lukaJohn Hunyadidrive eTurks ukusuka eSemendria.
Ngo-1438 uJohn Gutenberg ucela umshicileli wokunyathelisa kunye noovulindlela bezobuchwepheshe bezinto ezihambayo, ukudala iBhayibhile yokuqala eprintwe ngohlobo oluhambayo e-Mainz, eJamani.
Ngo-1442 uJohn Hunyadi uhola umkhosi waseHungary ukukhusela iTransan.
NgoJulayi 1442 isiqhawe sesizwe saseHungary uJohn Hunyadi unqoba ibutho elikhulu laseTurkey, ngaloo ndlela iqinisekisa ukukhululwa kwe-Wallachia neMoldavia.
Ngo-1443 uLadislaus III wasePoland ubonisa umanyano woxolo oneminyaka elishumi kunye nobukhosi base-Ottoman. Ingqungquthela ayinakuhlala, nangona kunjalo, kuba iinkokeli ezininzi zamaKristu zibona ithuba lokugqiba umkhosi waseTurkey owaphukileyo. Ukuba uLadislaus akazange enze uxolo kunye nabaseTurkey ngeli xesha, uMurad II wayenokutshatyalaliswa ngokupheleleyo kwaye uConstantinople akayi kuwela iminyaka engama-10 kamva.
1444 I-sultan yaseYiputa ihlasela iRhodes, kodwa ayikwazi ukuthatha isi siqithi kwi-Knights Hospitallers (ngoku iyaziwa ngokuba yi-Knights yaseRhodes).
NgoNovemba 10, 1444 Imfazwe yaseVarna: Umkhosi wamaTurkey angama-100 000 phantsi kwe-sultan Murad II unqoba amaPolish kunye namaHungary Crusaders anama-30,000 ngaphantsi kweLadislaus III yasePoland noJohn Hunyadi.
NgoJuni 05, 1446 uJohn Hunyadi unyuliweyo waseRussia egameni likaLadislaus V
1448 uConstantine XI Palaeologus, uMbusi waseDyzantine wokugqibela, uthatha itrone.
Oktobha 07, 1448 Imfazwe yaseKosovo: UYohn Hunyadi uhola amabutho aseHungary kodwa anqotshwa yiTurkey ezininzi.
NgoFebruwari 03, 1451 I- Ottoman sultan Murad II iyafa kwaye iphumelele nguMehmed II.
Ngo-Apreli 1452 i- Ottoman sultan Mehmed II inqaba eyakhiwe kwintsimi yase-Ottoman ngasentla kweConstantinople. Ukugqitywa kwinyanga ezintandathu, kusongela ukunqumla uxhulumaniso lweedolophu kunye namanxweme akwaMnyama kwaye iba yinto yokuqalisa ukuvinjelwa kukaConstantinople ngonyaka.
1453 I- Bordeaux iwela kwimikhosi yamaFrentshi kunye neMfazwe Yeminyaka Elikhulu iphela ngaphandle kwesivumelwano.
Ngo-Apreli 02, 1453 I- Ottoman sultan Mehmed II ifika eConstantinople. UMahomet uya kuphumelela ekungqingweni kwalo mzi ngokubanzi ngenxa yokufunyanwa kweengqungquthela ezingaphezu kwemashumi anesithandathu, okwenza ujikelezo lwendlela yokuqala yokusetyenziswa kwemfudumfesi kule ndlela. Ukusetyenziswa kwezi zixhobo ziphuculwe ngoncedo lweengcaphephe ezithunywe yiHongarian isizwe esiqhawe uJohan Hunyadi onqwenela ukuphelisa ubuqhetseba bobuKristu bama-Orthodox aseMpuma, nangona oko kuthetha ukuba kunceda abantu baseTurks abathandekayo.
Ngo-Ephreli 04, 1453 Isiqhamo saseConstantinople siqala. Ngelo xesha igunya loBukhosi baseByzantine lancinci ngaphezu kweyona dolophu yaseConstantinople ngokwayo. USultan Mehmed II uphulaphula izindonga emva kweentsuku ezingama-50 kuphela. Iindonga ezikhusela iKonstantinople zazimi iminyaka engaphezu kwewaka; xa bewa, uMbuso waseMpuma wamaRoma (iByzantium) nawo uphela. Emva kokuba ama-Ottomans anqobe uBukhosi baseByzantium aqhubeka ekhula kwiBalkan. Ubukhosi baseTurkey baseTurkey buya kutshintsha inkunzi yayo ukusuka eBursa ukuya e-Istanbul (eConstantinople). Emva kwe-1500, i-Moguls (1526-1857 CE) kunye ne-Safavids (1520-1736 CE) landela umkhosi wempi owabekwa yi-Ottomans waza wadala umbuso omtsha.
Ngo-Apreli 11, 1453 izibhamu zase-Ottoman zibangele ukuwa kweenqaba kwiSt. Romanus ngexesha lokuvinjelwa kweConstantinople. Oku kwaphulwa kwiindonga bekuya kuba yintloko ephambili yokulwa.
NgoMeyi 29, 1453 amaTurkey ase-Ottoman phantsi komyalelo kaMehmed II aphule eConstantinople aze athabathe isixeko. Ngaloo ndlela, intsalela yokugqibela yoBukumkani baseRoma iyatshatyalaliswa. UConstantine XI Palaeologus, umbusi wokugqibela waseByzantine, uyafa. Ngeli nqanaba akukho nto ininzi kwi-empire - kuphela kwisixeko saseConstantinople kunye nomhlaba othile ojikeleze kuyo kwiphondo laseGrisi laseThrace. Bobabini inkcubeko kunye nolwimi lwaluye lwaba ngumGrike kunokuba ngamaRoma. Noko ke, ama-Ottomans azibheka njengabazukeli abasemthethweni bamaRoma aseByzantine kwaye ngokuqhelekileyo basebenzisa igama elithi Sultan-iRum, iSultan yaseRoma.
NgoMeyi 15, 1455 uPapa Callistus III uvakalisa i-crusade ngokumelene neTurks ukuze aphinde abuyele kwisixeko saseConstantinople. Naphezu kokucela uncedo, iinqununu ezimbalwa zaseYurophu zathumela naliphi na uncedo kuConstantinople xa ukuvinjelwa kwaqala kwaye kwafika noopapa ama-200 nje kuphela. Ngaloo ndlela, le fowuni entsha kwiNkqubela yayiyinto encinci, iphela kakhulu.
1456 IAthene ithathwa yiTurks.
NgoJulayi 21, 1456 amaTurkey aseTurkey ahlasele iBelgrade kodwa ahlaselwa ngabaseHungary naseSerbia phantsi komyalelo kaJohn Hunyadi. AmaKristu athabatha i-canon yamanqaku amaninzi kunye nemali enkulu yempahla yezempi, ukuthumela iiTurks ukuba zifikelele ngokupheleleyo.
Ngo-Agasti 11, 1456 Ukufa kukaJohn Hunyadi, isiqhawe sesizwe saseHungary apho imizamo yokulwa neTurkey yase-Ottoman yenze into eninzi yokukhusela ukubusa kweTurkey ekubeni kungene eYurophu.
1458 Amajoni aseTurkey ayidla i-Acropolis eAthens , eGrisi.
Ngo-Agasti 18, 1458 uPius II ukhethwa ngumpapa. UPius ungumxhasi okhutheleyo weNkqubela yamaTranski ngokumelene neeTurks.
1463 iBosnia ithatyathwe yiTurks.
NgoJuni 18, 1464 uPapa uPius II uqalise i-short-crusade emelene neTurkey e-Italy, kodwa uyagula aze afe ngaphambi kokuba kwenzeke okuninzi. Oku kwakuza kubonakalisa ukufa kweengcinga "ezibalulekileyo" eYurophu kule minyaka emithathu edlulileyo.
Ngo-Agasti 15, 1464 uPapa uPius II uyafa. UPius wayemsekela ngenkuthalo yeeNkcubeko zamaKresta eziseTurks
1465 Ukuzalwa kukaSelim I, Ottoman sultan. U-Selim uza kuba ngumbhali wokuqala wama-Ottoman kwaye aphinde aphindwe kabini ubukhulu bobukhosi base-Ottoman, ikakhulukazi e-Asia nase-Afrika.
1467 I- Herzegovina ithatyathwe yiTurks.
NgoNovemba 19, 1469 uGugu Nanak Dev Ji wazalwa. Ngaloo mini iSikhs sikhumbuza ukuzalwa komsunguli wokholo lukaSikh kunye neyokuqala kweGuus Ten.
Ngo-1472 uSophia Palaeologus, umntakwabo kaConstantine XI Palaeologus, uMbusi wokugqibela waseByzantine, utshata no-Ivan II waseMoscow.
NgoFebhuwari 19, 1473 uNicolaus Copernicus wazalelwa.
1477 Incwadi yokuqala iprintwa eNgilandi.
Ngo-Apreli 1480 Ukuhlaselwa kweTurkey malunga ne-Hospitallers eRhodes ayiphumelelanga - kungekhona ngenxa yokuba i-Hospitallers yindlalifa ephezulu kodwa ngenxa yokuba iiJanishi zihamba ngesiteleka. UMehmed II uyalela ukuba bangabhubhisi naliphi na imizi abayibamba ukuze abe nayo yonke inkunzi. AmaJanise abhekisa ngoku kwaye akwenqabe ukulwa.
Ngo-Agasti 1480 uMehmed II uMnqobi uthumela i-fleet eyalelwa nguGedik Ahmed Pasha ngasentshona. Ithatha idolophu yasePitali yase-Otranto. Ukuqhubela phambili kwiItali kuphelile ngokufa kukaMehmed nokulwa phakathi koonyana bakhe phezu kobukhokeli boBukhosi base-Ottoman. Ukuba abaTurks baqhubela phambili, mhlawumbi babeza kunqoba ininzi yaseItali benenkathazo encinci, eyenziwa yiFrentshi kwiminyaka embalwa kamva ngo-1494 no-1495. Ukuba oko kwenzeka ngeli xesha, njengoko i-Renaissance isuka emhlabathini, imbali yehlabathi yayiyahlukahluka kakhulu.
Ngo-Meyi 03, 1481 Ukufa kukaMehmed II, umfundisi wase-Ottoman ophumelele ekuthineni iKonstantinople.
NgoSeptemba 10, 1481 Idolophu yase-Italy yase-Otranto isetyenziswe kwakhona kwiTurks.
1483 Ubukhosi be-Inca busekwe ePeru.
1487 amabutho aseSpain athabatha iMalaga esuka kumaMorors.
Ngo-1492 uChristopher Columbus ufumanisa iMelika egameni laseSpain, uqalise ixesha lokuhlola nokuloyisa kweYurophu.
Ngo-1492 iBajazet II, iSultan yaseTurkey, ihlasela iHungary kwaye iyanqoba umkhosi waseHungary kwi-Save River.
NgoJanuwari 02, 1492 uFerdinand waseAragon no-Isabella waseCastile, abaxhamlayo bakaChristopher Columbus, bawuphelisa umbuso wamaSilamsi eSpeyin ngokuwunqoba iGranada, inqaba yokugqibela yamaSilam. UFerdinand waseAragon no-Isabella waseCastile, abaxhamlayo bakaChristopher Columbus, bawuphelisa umbuso wama-Muslim eSpain. Ngoxhaswa yiTorquemada, Grand Inquisitor, bafuna ukuguqulwa okanye ukugxothwa kwamaYuda aseSpeyin.
1493 IDalmatia neCroatia zihlaselwa yiTurks.
NgoNovemba 06, 1494 Ukuzalwa koSueman (Süleyman) "Omkhulu," umfundisi wobukhosi base-Ottoman. Ngethuba lolawulo lukaSolomon uMbuso wase-Ottoman wawuza kufumana ukuphakama kwamandla kunye nempembelelo.
1499 IVenice iya emfazweni kunye neTurks kunye neenqwelo zaseVeneen zatshitshiswa kwiSapienza.
U-1499 uFrancisco Jime'nez uxhobisa ukuguqulwa kwamatyala aseMasia eSpain nangona isivumelwano sangaphambili sikaFerdinand no-Isabella ukuba amaSulumane aya kuvunyelwa ukugcina inkolo yabo kunye nemikhosi yabo.
Ama- 1500 amaMorama eGrada ukuvukela ukuguqulwa kwamanyanzeliso kodwa axhaswa nguFerdinand waseAragon.
Ngomhla wama-26, ngo-1512 i- Ottoman sultan Beyazid II iyafa kwaye iphumelele ngunyana wakhe, uSelim I. Selim uza kuba yintambo yokuqala yama-Ottoman kwaye aphindwe kabini ubukhulu be-Ottoman empire, ikakhulukazi e-Asia nase-Afrika.
1516 AmaTurkey ase-Ottoman aphanga iMamluk Dynasty yaseYiputa aze athathe ininzi yelizwe. AmaMamluk, kodwa, ahlala emandleni phantsi komyalelo wama-Ottomans. Kuze kube ngo-1811 uMuhammad Ali, umkhosi weAlbania, unqanda amandla onke amaMamluk.
Ngowe- Meyi 1517 iLungu leNgcwele lidalwe. Imanyano yamanyathelo amaninzi aseYurophu, yinto yamandla okulwa yamaKristu eyenzelwe ukulwa nosongelo olusakhulayo lokunyuka kweTurkey.
U-1518 uKhayyar al-Din, owaziwa ngokugqithiseleyo njengoBarbarossa, uthatha umyalelo wama-Muslim corsair iinqanawa ze-Barbary. IBhabarbarsa yayiza kuba yinto eyoyika kakhulu kwaye iphumelele kuyo yonke inkokeli ye-barbary pirate.
NgoSeptemba 22, 1520 Ukufa kweSelim I, i-Ottoman sultan. USelim waba ngu-Caliphu wokuqala wama-Ottoman waza wabuyela kabini ubukhulu bobukhosi base-Ottoman, ikakhulukazi e-Asia nase-Afrika.
NgoFebruwari 1521 uSuimiman Omkhulu uhola umkhosi omkhulu e-Instanbul ngenjongo yokunqoba iHungary kuFaro ukumkani II.
NgoJulayi 1521 amaTurkey aseTurkey phantsi kweSueniman i-Magnificent ayithatha idolophu yaseHungary yaseSabac, ebulala lonke igumbi.
Ngo-Agasti 01, 1521 uSuimiman Omkhulu uthumela abaJanise bakhe ukuba bahlasele uBelgrade. Abakhuseli balawula ukubamba kwi-citadel kude kube sekupheleni kwenyanga, kodwa ekugqibeleni baphoqeleka ukuba banikezele kwaye bonke abantu baseHungary babulawa-nangona besithembisa ukuba akukho mntu uza kuphazamiseka.
NgoSeptemba 04, 1523 I- Suleiman i-Magnificent iholele amaTurkey ase-Ottoman ekuhlaselweni kwabakwa-Hospitallers eRhodes abakwazi ukufikelela kude kube sekupheleni konyaka, nangona kunamaqela angama-500 amaqhawe, malunga ne-100 elwa namachule, amawaka eenkulungwane, kunye newaka bahlali be siqithi. Amandla aseTurkey, xa kuthelekiswa, amanani amabutho angama-20,000 kunye nabanqwelwana abangama-40,000.
NgoDisemba 21, 1523 I-Hospitallers e-Rhodes izinikezela ngokusemthethweni kuSoliman i-Magnificent kwaye iyakwazi ukufumana ilungelo lokuphuma eMalta, nangona ibulale amashumi amawaka emikhosi aseTurkey.
NgoMeyi 28, ngo-1524 Ukuzalwa kukaSelim II, uSultan wobukhosi base-Ottoman kunye nonyana oyintandokazi kayise, uSulemim I. I-Selim wayenomdla omkhulu kwimfazwe kwaye uya kugqiba ukuchitha ixesha elininzi kunye nabahlali bakhe.
NgoJanuwari 01, 1525 I-Hospitallers yahamba ngomkhumbi ukusuka eRhodes ukuya eMalta. Inkulu-mali yaseMalta, iValletta, ibizwa ngokuba enye yee-knights ngeli xesha, uJean Parisot de al Valette esuka eProvencal. I-Valette iya kuba yintloko ye-Order.
Ngo-Agasti 29, 1526 iMfazwe yama-Mohacs: i- Suleiman iLoisim yaseLungary ehlula kakhulu emva kweeyure ezimbini zokulwa, ekhokelela kwisihlomelo se-Ottoman eninzi eHungary.
1529 I- calvary yaseTurkey ifika kwidolophu yaseBavaria yaseRegensburg. Le yiyona ntshona ekude eNtshonalanga ukuba amabutho aseTurkey afikelele.
NgoMeyi 10, 1529 uSulemim oMkhulu ubeka iikhompi ezingama-250 000 kunye namakhulu eenqanawa zokungqinga iVienna, inkulu-mali ka-Charles V yoBukumkani baseRoma.
NgoSeptemba 23, 1529 I-vanguard ye-Armed army ifike ngaphandle kwamasango aseVienna, ikhuselwe ngamadoda angama-16 000 kuphela.
Ngo-Oktobha 16, 1529 uSulemim oMkhulu kakhulu unika ukukhuselwa kweVienna.
1530 I-Hospitallers ishukumisela isiseko sabo sokusebenza kwisiqithi saseMalta.
1535 Charles V, uMlawuli oyiNgcwele oyiRoma, amazwe aseTunisia kunye neengxowa zeTunis.
1537 I- Ottoman Sultan Suleiman i-Magnificent inokwakhiwa kweendonga ezungeze iSixeko Esidala saseYerusalem saqala.
1537 Amabutho angama-Imperial phantsi kweCarlos V eRoma.
1541 Ukwakhiwa kweendonga ezungeze iSixeko Esidala saseYerusalem kugqityiwe.
NgoJulayi 04, 1546 Ukuzalwa kukaMurad III, uSultan wobukhosi base-Ottoman kunye nendodana endala yeSelim II. Njengoyise uyise u-Murad akanakukhathalela kakhulu imibandela yezopolitiko, ukhetha ukuchitha ixesha kunye nabahlali bakhe. Ubawo abantwana abangama-103.
1552 amaRussia abamba idolophu yaseTartar yaseKazan.
1556 Abantu baseRussia bathabatha idolophu yaseTartar yaseAstrakhan, ekumzantsi ukuya kumlambo weVolga, bebenako ukufikelela kwiLwandle laseCaspian.
NgoMeyi 19, 1565 uSuuliman uhlaselo oluhle kakhulu kwi-Hospitallers eMalta kodwa aluphumelelanga. Ukubala ama-700 nje kuphela, iinjunja zaxhaswa yiintlanga ezininzi zaseYurophu ezazibona iMalta njengendlela yokuya eYurophu. Amashumi amawaka eTurks awela echwebeni le-Marsasirocco.
NgoMeyi 24, 1565 i- Ottoman Turks ihlasela inqaba yeSt. Elmo eMalta.
NgoJuni 23, 1565 Inqaba yaseMalta yaseSt. Elmo iwela emkhosini weTurkey, kodwa kungabikho abakhuseli banokukwazi ukulimala loo manani kumawaka.
NgoSeptemba 06, 1565 Ukuqinisekiswa kweSicily ekugqibeleni kufika e-Malta, kuphazamise amabutho aseTurkey kwaye kubangele ukuba bayeke ukuvinjelwa kwamaKristu asele asele.
1566 uSultan Selim II unikela iJamani imvume yokutshata.
Ngomhla wama-26, ngo-1566 Ukuzalwa kukaMehmed III, i-future sultan yolawulo lwase-Ottoman.
NgoSeptemba 05, 1566 Ukufa kweSueman (Süleyman) "oPhezulu," umfundisi waseMbusweni wase-Ottoman. Ngethuba lolawulo lukaSulumane ubukhosi base-Ottoman bufikelele ekuphakameni kwamandla kunye nempembelelo.
NgoSeptemba 06, 1566 Imfazwe yaseSzigetvar: Nokuba ibulale uSultan Suleiman oMnyama kakhulu ebusuku ngaphambi kokumangala, amaHungary alahlekelwa yimikhosi yaseTurkey.
NgoDisemba 25, 1568 I-Morisco (amaSulumane aguqukela ebuKristwini eSpeyin) ukuvukela kwaqala xa amadoda angamakhulu mabini egqoke iitranski zaseTurkey engena kwikota yaseMorgy yaseMadrid, abulala a balindi abambalwa, aphanga ezinye ivenkile.
NgoOktobha 1569 UFilipu II waseAstriya wayala umntakwabo, uDon Juan waseAstriya, ukuba axoshe uMorisco (umSulumane oguqukela ebuKristwini) evukela eAlpujarras 'ngemfazwe yomlilo negazi.'
NgoJanuwari 1570 uDon Juan wase-Austria uhlasela idolophu yaseGalera. Wayeyaliwe ukuba abulale wonke umntu ngaphakathi, kodwa akazange avumele ahambe amakhulu amabhinqa kunye nabantwana.
Ngowe- Meyi 1570 uHernando al-Habaqui, umphathi wegumbi likaTijola, unika uDon Juan wase-Austria.
NgoJulayi 1570 Ngemiyalelo evela kuSelim II, i-Ottoman sultan, amabutho aseTurkey alawulwa yiKara Mustafa umhlaba waseCyprus ngenjongo yokuyifumana kwakhona. Uninzi lweso siqithi luba ngokukhawuleza kwaye amawaka abulawe. Kuphela i-Famagusta, ilawulwa yirhuluneli yaseMacantonia Bragadion yaseVenice, iphela malunga nonyaka.
NgoSeptemba 1570 uLuis de Requesens, ummeli-mlawuli wekosi uFilipu II waseAstriya, uhola umkhankaso oya eAlpujarras ophelisa uMorisco ukuvukela umhlaba wonke.
NgoNovemba 1570 Ibhunga lobukhosi eSpeyin ligqiba ukujongana namaMorisco ngokuwaxosha eGrenada nokuwahlakaza yonke indawo yaseSpeyin.
Ngo-Agasti 01, 1571 I-Venetian phantsi komlawuli waseMacantonia i-Bragadion iyavuma ukunikela i-Famagusta eCyprus kubahlaseli baseTurkey.
Agasti 04, 1571 Irhuluneli yaseFagagusta iMacononia Bragadion ithinjelwa ngabaseTurkey, ngokuchasene nesivumelwano soxolo esasayinwe.
Ngo-Agasti 17, 1571 iMacononia Bragadion, iindlebe kunye neengcambu zakhe sele ziqhelile, zityhulwa ziphila ziTurks njengombonakaliso kubantu baseCyprus ukuba umyalelo omtsha wawuphezu kwabo.
Ngo-Oktobha 07, 1571 Imfazwe yaseLepanto (Aynabakhti): AmaTurkey alawulwa ngu-Ali Pasha anqotshwa kwiGulf of Corinth ngokubambisana kwamandla aseYurophu (i-Holy League) phantsi komyalelo kaDon Juan wase-Austria. Le yona mfazwe omkhulu kunqabileyo kwihlabathi ukususela kwi-Battle of Actium ngo-31 BCE. AmaTurks alahlekelwa ubuncinane iinqanawa ezingama-200, ezibhubhisa amandla abo emikhosi. Ukuziphatha kwamaKristu aseYurophu kuphakanyiswa kakhulu ngelixa iTurkey namaSulumane iyancipha. Amabutho angama-30,000 kunye nabasolwandle baya kufa malunga neeyure ezintathu, ukulimala okungaphezu kweyiphi na enye imfazwe yemikhosi kwimbali. Kodwa ke, imfazwe ayikho into ebalulekileyo ekutshintsheni indawo okanye ezopolitiko. Umbhali odumileyo waseSpeyin uCervantes uthatha inxaxheba ekulwa kwaye uyalimala esandleni sakhe sokunene.
NgoDisemba 24, 1574 Ukufa kukaSelim II, uSultan wobukhosi base-Ottoman kunye nendodana eyintandokazi kayise, uSulemim I. I-Selim akenzanga nto yokwandisa ubukhosi, ekhetha ukuchitha ixesha lakhe kunye nabahlali bakhe.
1578 Imfazwe yase-al-Aqsr al-Kabir: AmaMorocco awanqobile isiPutukezi, agqiba ukufuduka kwemikhosi eAfrika
Oktobha 01, 1578 UDon Juan waseAustria uyafa eBelgium.
1585 Ubukhosi base-Ottoman bubonisa isivumelwano soxolo kunye neSpain. Oku kuya kuthintela ama-Ottomans ukuba aphendule iifowuni zenkxaso ku-Queen Elizabeth I waseNgilani. U-Elizabeth wayebethemba ukufumana ii-Ottomans ukuba zithumele iindawo eziliqela ezili-12 zokunceda ekukhuseleni i-England ngokumelene neS Armada yaseSpeyin.
Ngo-Apreli 18, 1590 Ukuzalwa kuka-Ahmed Mina, i-future sultan yolawulo lwe-Ottoman Empire.
NgoJanuwari 15, 1595 Ukufa kukaMurad III, uSultan wobukhosi base-Ottoman kunye nendodana endala yeSelim II. UMrad akazange akhathalele kakhulu imicimbi yezopolitiko, ukhetha ukuchitha ixesha kunye nabahlali bakhe. Wayezala abantwana abangama-103. Omnye, uMehmed III, uyaphumelela uMrarad kwaye unabo abazalwana bakhe abalishumi elinesibhozo baxakeka ukuba bafe ukuze baphephe naluphi na ukulwa malunga nabaya kulawula.
1600 Abase-Austrian bajikeleze idolophu yaseCanissa. Phakathi kwama-Austrian ngumvolontiya waseNgesi ogama linguJohn Smith. Emva koko uza kuhamba ekuncedeni ekoloniyali yaseVirginia aze atshade nomkhosana wasePain Pocahontas.
NgoDisemba 22, 1603 Ukufa kukaMehmed III, sultan we-Ottoman Empire. Uyaphumelela ngonyana wakhe oneminyaka eli-14 ubudala, u-Ahmed I.
Nguwuphi uhlobo loNqulo lobuKristu?
Ukuziphatha nokuziphatha: Ifilosofi yokuziphatha, ukhetho kunye nomntu
UAdolf Hitler ngoThixo: Iingcaphuno ezibonisa ukukholelwa kunye nokholo
I-Texas v. Johnson: Isigqibo seNkundla ephakamileyo ka-1989
Ngaba Imithandazo evunyelwe esikolweni?
Iimpawu zeMveli kunye neempawu zentsapho eMelika
Ikholeji yaseKentucky Wesleyan i-GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Kutheni ii-Conservatives zichasa ukuphakamisa umvuzo omncinci
Protoceratops vs Velociraptor: Ubani Owunayo?
Indlela Yokuthanda Ngakumbi
Abakwa-Saint Anselm College Admissions
I-Negro Baseball League Isihlandlo
Ukuthelekisa isiXeko eMelika naseCanada
Indlela yokuvakalisa amagama aseJamani ngesiNgesi
Ukubuyisela okulungileyo (igrama)
Ibali le-Opera 'La Calisto' likaFrancesco Cavalli
I-Mano Destra kwi-Piano Music Notation
I-Le Moyne College Admissions